तपाईंको आजको राशीफल (आइतबार २०७६ श्रावण २६) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय -
तपाईंको आजको राशीफल (आइतबार २०७६ श्रावण २६) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय
२०७६, २६ श्रावण आईतवार ०१:२९ August 11, 2019 clickonLeaveaComment on तपाईंको आजको राशीफल (आइतबार २०७६ श्रावण २६) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय
मेष : चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (ARIES)
तपाईंको शारीरिक रोग आराम हुने धेरै सम्भावना भएकोले खेल प्रतियोगितामा भाग लिन सक्षम हुनु हुनेछ। खर्चमा वृद्धि हुन्छ तर आयमा वृद्धि हुनाले तपाईंलाई तिर्न सजिलो पर्नेछ। साथीहरूसँग बिताइने साँझ सुखद हुनेछ। कसैले तपाईंको प्रसंशा गर्न सक्छ। आज तपाईंको बातचीतको पक्ष बलियो हुनेछ। कसैले वैवाहिक जीवन झगडा र यौन हो भनेर सोच्ने गर्छन्, तर आज सबै निर्मल हुनेछ।
वृष : इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (TAURUS)
आध्यात्मिक व्यक्तिले आशिष दिन्छ र मनमा शान्ति ल्याउँछ। आशिष् र राम्रो भाग्य तपाईंको बाटोमा आउनाले इच्छा पूरा हुनेछ – र यो अघिल्लो दिनको कठिन कामको परिणामले गर्दा हो। परिवार र साथीहरूसँग रमाइलो समय बित्नेछ। तपाईंको प्रेमीले आज उपहारका साथ केही समयको आशा गर्न सक्छन्। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। तपाईंको जोडी आज धेरै रोमान्टिक देखिन्छन्।
मिथुन : का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (GEMINI)
सानो कुराले आफ्नो मनमा चिन्ता गर्न नदिनुहोस्। आजैको दिनको लागि मात्रै बाँच्ने र मनोरञ्जनमा धेरै समय र पैसा खर्च गर्ने आफ्नो बानीमा नियन्त्रण गर्नुहोस्। मित्र र परिवारका सदस्यहरूले तपाईंलाई सहयोग र प्रेम प्रदान गर्नेछन्। अचानक आएको रूमानी हावाले तपाईंको आत्मालाई उँभो उठाउनेछ। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। आज तपाईंको जोडी साँच्चै नै राम्रो मुडमा छ। तपाईंले एउटा आश्चर्य प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ।
कर्कट : हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (CANCER)
यदि सम्भव छ भने लामो यात्रा गर्नबाट जोगिने प्रयास गर्नुहोस् किनभने तपाईं यात्रा गर्न निकै कमजोर हुनुहुन्छ र यसले तपाईंलाई अझै कमजोर पनि बनाउँछ। तपाईंका हातबाट सजिलै धन खर्च भए तापनि – तपाईंका भाग्यशाली ताराले आर्थिक लाभ बनाइ रहनेछन्। तपाईंको लापरवाही मनोवृत्तिले आमाबाबुको चिन्ता बढ्नेछ। तपाईंले कुनै पनि नयाँ परियोजना सुरु गर्नु अघि उनीहरूलाई विश्वस्त गर्नु आवश्यक छ। तपाईंले आफ्नो उत्तम व्यवहारमा हुन आवश्यक छ – किनभने आज आफ्नो प्रेमीलाई नराम्रो लाग्न धेरै केही हुनु पर्दैन। तपाईंले कसैलाई दिएको सहायताको इनाम वा स्वीकार प्राप्त हुनेछ यसैले आज तपाईं सबैको प्रसंशाको पात्र हुनुहुनेछ। आफ्नो साथीको आलस्यले आज धेरै कार्यहरुमा बाधा पर्न सक्छ।
सिंह : मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (LEO)
आनन्ददायी यात्रा र सामाजिक भेलाहरूले तपाईंलाई तनाउमुक्त र खुसी राख्नेछ। तपाईंले आफ्नो अतिरिक्त पैसा आउने समयमा लाभ हुने सुरक्षित स्थानमा राख्नुहोस्। पोस्टद्वारा आएको पत्रले सम्पूर्ण परिवारमा खुसीको समाचार ल्याउँछ। काम बाँकी भए तापनि रोमान्स र सामाजिकताले तपाईंको मनलाई शासन गर्नेछन्। आज धेरै समस्याहरू हुनेछन् – जसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। आज, तपाईं फेरि आफ्नो जोडीसँग प्रेममा पर्नु हुनेछ।
कन्या : टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (VIRGO)
खुल्ला खाना खाँदा विशेष सावधानी लिनुपर्छ। यसको लागि तपाईंले अनावश्यक तनाउ नलिनुहोस् किनकि यसले मानसिक तनाउमात्र दिनेछ। दिनको पछिल्लो भागमा वित्तीय सुधार हुनेछ। कुनै मानिसहरू आफुले गर्न सक्ने भन्दा बढी प्रतिज्ञा गर्छन – कुरा मात्रै गर्ने र कुनै परिणाम नदिने मानिसहरूलाई बिर्सिनुहोस्। रोमान्टिक भावनाहरू आज फेरिनेछन्। आज तपाईंले किनमेल गर्न जानुभयो भने आफैलाई राम्रो पहिरन सामाग्री छनोट गर्न सम्भावना छ। तपाईंको जोडी साँच्चै नै स्वर्गदूत हो भनेर तपाईंलाई थाहा छ। हामीलाई विश्वास गर्नुहुँदैन? आज विचार गरेर अनुभव गर्नुहोस्।
तुला : र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (LIBRA)
पिउने बानीबाट छुटकारा प्राप्त गर्नको लागि आज धेरै शुभ दिन हो। तपाईंले रक्सी पिउनु स्वास्थ्यको लागि घातक शत्रु हो भनेर बुझ्नु पर्छ र यसले तपाईंको दक्षता पनि घटाउँछ। तपाईं एउटा रोमाञ्चक नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ – जसले तपाईंलाई वित्तीय लाभ हुनेछ। वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेशको लागि राम्रो समय। तपाईंको प्रियले प्रतिबद्धता खोज्नेछन्। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज प्रेम गर्न पर्याप्त समय प्राप्त भएको छ जस्तो लाग्छ।
वृश्चिक : तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (SCORPIO)
तपाईंको लगातार सकारात्मक सोचलाई पुरस्कृत गरिनेछ। किनकि तपाईं आफ्नो प्रयासमा सफल हुने सम्भावना छ। आज तपाईंलाई प्रदान गरिएका लगानी योजनाहरुमा तपाईंले दुई पटक हेर्नुपर्छ। तपाईंले आफ्नो घरको वातावरणमा अनुकूल परिवर्तन ल्याउनुहुनेछ। आफ्नो प्रियसँग वनभोजमा गएर आफ्नो बहुमूल्य समयलाई पुनर्जीवित गर्नुहोस्। कुनै तर्कमा परेर कठोर टिप्पणी दिनबाट बच्नुहोस्। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीसित आफ्नो जीवनको सबैभन्दा राम्रो समय बिताउनु हुनेछ।
धनु : ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (SAGITTARIUS)
आफैलाई आशावादी हुन उत्प्रेरित गर्नुहोस्। यसले विश्वास र नम्रता बढ्छ तर त्यही समयमा डर, घृणा, डाह, बदला जस्ता नकारात्मक भावना छोड्न पनि तयार हुनुहोस्। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। तपाईंसँग आज सीमित धैर्य हुनेछ – तर कठोर वा असंतुलित बोलीले तपाईंका वरिपरि मानिसहरूलाई नराम्रो लाग्न सक्छ भन्ने ध्यान राख्नुहोस्। रोमान्टिक सम्झनाहरुले तपाईंको आजको दिन बित्नेछ। खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्ने तपाईंको क्षमताले आदर पाउनुहुनेछ। आफ्नो जोडीले जब सबै कुराहरू भूलेर तपाईंलाई माया गरेर अँगाल्नेछन्, तब जीवन साँच्चै रोमाञ्चक हुनेछ।
मकर : भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (CAPRICORN)
बाहिरी खेलहरूले तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछन् – ध्यान र योग लाभदायक हुनेछन्। आज लगानी गर्नबाट बच्नुपर्छ। परिवारका सदस्यहरूसँग शान्तिपूर्ण र शान्त दिनको आनन्द लिनुहोस् – मान्छे समस्याहरू लिएर तपाईंसँग आए भने – तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस् र यसले तपाईंको मन खिन्न पार्न नदिनुहोस्। व्यक्तिगत निर्देशनले तपाईंको सम्बन्ध सुधार हुनेछ। आज धेरै समस्याहरू हुनेछन् – जसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ। यो दिन तपाईंका वैवाहिक जीवनको सबै भन्दा राम्रो दिन हुन सक्छ।
कुम्भ : गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (AQUARIUS)
तपाईंलाई साह्रै तनाउ भएको महसुस भयो भने – बच्चाहरुसँग बढी समय बिताउनुहोस्। तिनीहरूको न्यानो अंकमाल लुटुपुटु वा निर्दोष मुस्कानले तपाईंलाई आफ्नो दुःखबाट छुटकारा मिल्न सक्छ। हतारमा निवेश नगर्नुहोस्। यदि निवेश गर्दा तपाईंले सबै सम्भव कोणबाट हेर्नु भएन भने घाटा निश्चित छ। तपाईंको दया र समझलाई पुरस्कृत गरिनेछ। तर कुनै पनि हतार निर्णयले तिनीहरूलाई दबाबमा राख्नेछन, सावधान रहनुहोस्। आज कोही तपाईंको प्रेम बीच आउन सक्छ। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। आज तपाईंको वैवाहिक जीवन आफ्नो परिवारबाट धेरै नै प्रभावित हुन सक्छ, तर तपाईंहरू दुवैले बौद्धिमानी भएर कुराहरूको संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नु हुनेछ।
मीन : दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (PISCES)
तपाईंको दयालु प्रकृतिले आज धेरै खुसीयाली ल्याउनेछ। तपाईंले आज राम्रो पैसा कमाउनुहुनेछ – तर यसलाई आफ्नो हातबाट खस्न नदिने प्रयास गर्नुहोस्। घरेलू घरधन्दामा आफ्नी पत्नीलाई उनको कार्यभार कम गर्न सहयोग गर्नुहोस्। यसले साझेदारी र आनन्दको लागि प्रोत्साहन दिनेछ। तपाईंले वास्तविकताहरुसँग सामना गर्नाले प्रियलाई बिर्सिनु पर्नेछ। सामाजिक साथै धार्मिक कार्यको लागि उत्कृष्ट दिन। तपाईं आफ्नो जीवनसाथीको बकबकले झर्किन सक्नु हुनेछ – तर उनले तपाईंको लागि साँच्चै नै महान कार्य गर्नेछन्।
म्यानमारमा पहिरोमा परी २९ जनाको मृत्यु
भारतकी पूर्वविदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको अन्तिम ट्विटमा त्यस्तो के थियो जसले यती धेरै चर्चा पायो??
तपाई को राशीफल (बुधबार २०७६ कर्तिक २०) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस
२०७६, २० कार्तिक बुधबार ०२:१९ November 6, 2019 clickon
तपाईंको आजको राशीफल (सोमबार २०७६ बैषाख २३) – तपाईं सबैको दिन शुभ र मंगलमय रहोस
२०७६, २३ बैशाख सोमबार ००:४१ May 6, 2019 clickon
तपाईको (शनिबार आषाढ २७) को राशीफल
२०७७, २७ असार शनिबार ०३:१२ July 11, 2020 clickon
काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ८५९ मा सङ्क्रमण पुष्टि
एकै दिन दुई हजार २० नया कोरोना सङ्क्रमित
नेपाल चिकित्सक संघ द्वारा विज्ञप्ति जारी गर्दै अनशनरत डा। केसीको माग सम्बोधन र जीवन रक्षा गर्न माग
नेपाली समयानुसार अपराह्न १२ बजे नेपाली रेल नेपाली भूमिमा आइपुग्यो, आगामी बडादशैँ–तिहारसम्म सो रेल सञ्चालनको योजना
मलमास वा अधिकमास आजदेखि शुरु, मच्छेनारायण मेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण स्थगित
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड अवरुद्ध
विश्वभरि कोभिड-१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीन करोड नाघ्यो
प्रदेश–२ मा सशस्त्र खप्रहरीको रिजर्भ गण स्थापना
उत्तम फल प्राप्तिका लागि शुक्रवारको दिन गरौ महालक्ष्‍मी र संतोषी माताको पूजा
बिगत चार दिन देखी अनसनमा रहेका डा। गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै, आफ्नो सास रहुञ्जेलसम्म लडिरहने भने
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी केही परिमार्जनसहित पास हुने – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली
नेपालको रेल तयार, शुक्रबार जनकपुर पुग्ने
तपाईको (शुक्रबार अशोज २) को राशीफल
काठमाडौं उपत्यकामा २४ घण्टामा ६१८ सङ्क्रमणको पुष्टि